Read more: Falaasama Humnaa Isa Haaraa
Read more: “Har’a Sagalee Isaa Yoo dhageessan laphee keessan hin xiiqeessiinaa”
Jecha kana kan dubbate Waaqayyo kennaalee hedduun kan isa eebbise, mootii Israa'eel kan ture Raajicha Daawiiti. Kennaawwan hedduu inni ittiin ebbifame keessaa tokko kennaa raajii dubbachuu ture. Bakka kanatti kaayyoon inni itti raajii kana dubbateef, Waaqayyo Dubroo Maariyaam foonsheerraa foon, lubbuusheerraa lubbuu fudhachuun Tokkoomaaf (Tawaahidoof) ishee filachuusaa hubachiisuufi. Raajichis wanta qabatamaan mul'atu Tulluu Tsiyoonitti fayyadamuun, tulluu iccitii kan taate waa'ee Qulqulleettii Dubroo Maariyaam dubbateera. Barnoota kana keessatti Dubroon Maariyaam tulluu qulqulleettii tulluuwwan qulqullootarraa argamte ta'uushee baranna. Akka fedha Waaqayyootti, maaliif akka tulluutti fakkeeffamtes ni mari'anna. Sagalichis akkas jedha:
Bu'uuronnishee tulluuwwan qulqullootarraati. Dunkaanota Yaa'iqobirra Waaqayyo balbaloota Tsiyoon jaalata. Yaa magaalaa Waaqayyoo waa'ee kee wanta dinqiitu dubbatame. ...Namni haadha keenya Tsiyoon isheetiin jedha; ishee keessattis namni dhalate; Inni Ol Aanichi ofumasaa ishee hundeesse (Faar. 86: 1-5).
Sagaleen armaan olii waa'ee iccitii Tulluu Tsiyoon nu hubachiisa. Jechi Tsiyoon jedhu hiika afuuraa hedduu qaba. Kanaaf, icciticha hubachuuf maalummaa Tsiyoonirraa eegaluu qabna.
Read more: Hundeenshee tulluuwwan qulqulluurraati